Hal-xidhaale taban oo 3-xan ayey ku tahay Wasiirka maaliyada ,wasiirka ganacsiga iyo ganacsatada…Dr.khadar-Libaaxley. | Togdheer News Network
Hal-xidhaale taban oo 3-xan ayey ku tahay Wasiirka maaliyada ,wasiirka ganacsiga iyo ganacsatada…Dr.khadar-Libaaxley.
Hal-xidhaale taban oo 3-xan ayey ku tahay Wasiirka maaliyada ,wasiirka ganacsiga iyo ganacsatada sicir bararka maciishada iyo sarifka lacagaha cirka isku sii shareeraya !! Dr.khadar-Libaaxley.
Waxa haatan ummada ku soo duxoo diiqdii ka gooyey
waxa ducuuntay duul ganacsatoon cidi la doodayne
Kuwaasaa dalkii ololiye iyo doolar aan dhicine
Dibada iyo gudaha isku xidhan daakhil iyo guude
Dalbashada afkana faakisyaa la isku dirayaaye
Doraad waxaad ogeyd maanta wey sii dalacayaanee
Deegaanka lacagtiisiibaa laga diqoodaaye
Doolar iyo dirham ayaa fasaqay amase diinaare
Danyartiyo dadkii baadiyuhu wey dal-dalanyihiin.
Tuduc ka mid ah gabayga darajo ee abwaan Jamac kadiye cilmi.
Furmo weydiimeed :
maxaa sicir bararka miciishada la quuto iyo sarifka la cagaha sidii dayaxka gacmeed maalinba maalinta ka dambeysa cirka ku sii takhlan oo wixii kor u kacaaba soonoqod aaney lahayn ?!
kulaylka iyo kadeedka nololeed ee bulshada sabankan kala guurka ku soo beegmay miyaa la maareyn kariwaayey mise waa la hagranayaa ?! mise xeelad dahsoon oo ishaaradu qabatay baa jirta ?!.
ma kuu muuqataa in wasiiradan iyo ganacsatadan isku habranayaan ? miyey kuu muuqataa danta musharaxiinta kulmiye inay wadaan mise ummada ayey ku dirayaan?! waa maxay isku furankani ?!.
Somaliland ganacsatada ugu badan tirada iyo hayntaba ee soo dejiya maciishad, cuud iyo cusbaba oo lagu daray wasiirka maaliyada iyo wasiirka ganacsigu intuba waa ( super subeer awal rabi ha u libin laabo oo ha koriyoo ha kobciyo dhamaan umada reer somaliland insha’allah ).
Ganacsatadani waxa ay maamulaan badi ganacsiga iyo suuqyada dalka heer uu yahayba , haday maciishada, wiciyada iyo bagaashka tahay, inta diib iyo udug la ismariyo; kuma eeka intan oo kaliya waxa kaalin sheegiisa leh gacan ku haynta ganacsiga qaadka ugu badan ee dalka lagu cuno, waxa iyana ku sidkan maamulka guud ee ( sarifka lacagaha maxaliga iyo qalaad isla markaana gooya subaxii la joogaba qiimaha sarifka marayo oo ku sidkan qiimaha maciishada nolosha sii qaaliyoobaysa ee ka caagan hoos u soo noqoshada !!! ).
Waxan oo dhami maaha hadyad u gaara ama la siiyey ganacsatadan; ( 90% waxa ay tahay mihnad Awal-Ayaanle hawadooda iyo ruuxdoodaba ay raaciyeen, weelka ay illaahay la hortageena ku xardheen fikir , dadaal iyo tacab loo raaco sida geel jiruhuba geela u raaco !!)
Jawaabaha weydiimaha kor ku xusan cida ay khusaysiyo qofkastoo akhristaan u daafayaa !! dulucdiyo diirsimaadku wuxu yahay :
Ganacsatadani waa mujaahidiin qarannimada iyo dhidibo u taaga hanaanka dawladnimo , waxa ay suuragaliyeen qorshe kasta oo iyaga la’aantood dawladnimada somaliland aaney ku socoteen !! waxa ay kala soo dabaasheen baxar-baxuur , duruufo qalafsanaa oo dawladnimadu ( mujo iyo wax xalay dhashay oo kale aheyd ayey naaska ku duween oo ay soo habeen illaa iyo heerkan maanta la joogo, mahada kowaad rabi baa leh ta xigtana ganacsadan ugu dambeyna shacbiga reer somaliland ) kuwani waa qayb ka mid ah dadaal sharafeedyada diwaanka , looxa iyo laabaha ummada ugu sajilan oo keyd iyo abaal dhig u ah ).
Hayeeshee Tallo aduun subaxba tii la joogo ayaa laxawgeeda iyo wacyigeeda gardaadinaysa ; xaalka maanta dadweynuhu ku suganyahay mii iyo magaalaba , sicir bararka, maciishad bararaka , sarif bararka, wakhtiga kala guurka ee lagu jiro, duruufaha siyaasiga ah ee dhoolkoodu ina dul hoganayo intaba idinka iyo ummaduba wey ka dharagsantahay farajna cindigay ku hayaan iyo in culaysku ka faydmo !! kaalinta doorka la wada sugayaayi waa kii wanaagsanaa ee horayba la idiinku yiqiin.
Cisiga mansabka iyo maalkaba rabi baa bixiya had ba cida uu u garto in ay hanan karto ayuu ku dul furaa ayaamuhuna wey isdaba meerayaan waase imtixaan iyo isku eegis bal in lala ambado iyo in sida ay tahay looga soo baxo; maanta illaahay wuxu eegayaa !! bulshada wadankuna eegaysaa !! bal sida xaaladan aan kor iyo dhexba ku soo xusay ay uga dabaaliyaan bulshada wasiiradan iyo ganacsatadan kor ku xusan ee isku ( blood line ka ah ).
Ma’aha xilligan kala guurka siyaasiga ah in ay noqoto kala guur dabaqado nololeed oo horleh.
Xaalada lagu jiraayi waxa ay si toosa iyo dad-ban intaba saameyn buuxda ugu yeelan kartaa xisbul xaakimka markale raba in uu soo laba kacleeyo!!
Ma isleedahay dadka xaalada jirta la dheel-dheeliyaaya hoosna u dareensan in xaaladani ay aheyd in dawladu wax ka qabato in ku hiranayaan in bulshadu u godlato markale?!!.